Formstack: Tinye Formdị na Dropbox | Martech Zone
Anyị na-eji Dropbox ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla iji kpokọta ma kesaa faịlụ na ndị ahịa anyị. N'oge ụfọdụ, ndị ahịa anyị enweghị akaụntụ Dropbox ma ọ bụ iwu ụlọ ọrụ ha anaghị ekwe ka ha debanye aha. Na-anakọta ndị faịlụ, anyị na-eme ka a ụdị na Mpempe akwụkwọ (ndị na-akwado teknụzụ anyị) ma jikọta ụdị ahụ Dropbox.
Esi tinye otu ụdị na Dropbox
Mmekọrịta Dropbox na ụdị gị bụ ịdọrọ na dobe dịka ndị ọzọ Mpempe akwụkwọ mfe iji.
Na-agagharị na Settings na Formdị gị.
Na-agagharị na Ngwakọta Hub.
họrọ Documents Ọzọkwa Tinye Dropbox.
Ikike ngwa ahụ, họrọ folda gị ma ị dị njikere ịga!
Tags: Dropboxuploaddị bulite faịlụformsmpempe akwụkwọnjikọta ọnụTechbulite ụdị
Feb 25, 2013 n’elekere 11:01 nke abali
Mma! Ejiri m Evernote nke a maka ntụle ma emechaa.